Jikelele senzalo lapho eboleka imali ebhange
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Jikelele senzalo lapho eboleka imali ebhange
Uma uboleka imali ezikhungweni zezimali, owokuqala beveza kungaba abantu abaningi ukuthi ibhange.
umuzwa wokulondeka, ngoba lokho ibonwa njengoba ephakeme kunaleyo ezifana ezezimali umthengi.
Nokho, ngiyacela ezinye imali ebhange, ungase ambalwa abazi kangakanani zenzalo ukuthola kucocekile. Sethula wena luhlolo kwemali nentshisakalo
ezihlobene / ngebuhle nebubi
ukuboleka imali ebhange
umuntu wokuqala ukuboleka imali Uma
endabeni labo ababoleka imali okokuqala, inani lenzalo kuyinto izinga lokushintshisana wukuthi ngonyaka mayelana 4%. Uma
waboleka uma omunye ngenyanga 100,000 yen, isithakazelo kuyoba 100,000 yen × 4% × 30/365 = 328 yen.
Okwamanje, intela ukusetshenziswa kuyinto 8% kwenkathi. Uma
ingxenye yalo, ngicabanga ngo ephansi kakhulu, abantu abaningi banomuzwa.
By endleleni, lapho uqala waboleka imali ezezimali umthengi, mayelana 4.5% kuya ku 5%, kuba intengo emakethe.
kuphela, uma ushintsho emhlabeni 1%, ungase ube labo abacabanga futhi benze akulona kangcono ezezimali umthengi kukhona lula isithombe singenakwenzeka luhlolo.
Nokho, uma wena waboleka 100,000 yen ngaphansi kwezimo ezifanayo, isithakazelo kuyophuma 369 yen ukuba 410 yen futhi umehluko.
okungukuthi, lokhu lapho inani elikhulu, ezifana 300,000 yen futhi 500,000 yen, hhayi kufanele Kunzima ukucabanga kokuvula umehluko okukhulu.
Uma ezibolekwe ndawonye ngokwezinga elithile, njengoba umehluko leli nani umthwalo omkhulu, ngincoma kwemali kusukela ongaphakeme lenzalo ibhange ngisho 1%.
< h2> Uma usebenzisa yizinkampani ezimbalwa
kuthiwa lathathwa yasebhange okunzima noma ezezimali umthengi, avame ukuba nezinga lenzalo lingaphezulu.
Ngo loan ikhadi amabhange ezinkulu, kuba isilinganiso Cishe iningi mayelana 14% Ilungiselelwe njengengxenye i mkhawulo. Uma esanda waboleka
kwezigidi ezingu-30 kanye nezinga lenzalo ka nyangazonke kuyoba \_ 3.452.
umthwalo akuyona nje kuphela ukuthi, futhi kumelwe abe yebo ibalwa isithakazelo lemali ukuthi kubolekwe ezinye izinkampani. Abantu abenza zokweboleka e
izigidi, uma une-okungamaphesenti angu-14 senzalo, udinga ukukhokha inzalo njalo ngenyanga ka \_ 11.506.
kunjalo ejwayelekile slide buyiselo indlela, ngoba inani lemali ukuthi lahlanganisa oyinhloko uvezwa njengoMahluleli izinkokhelo, ungase umthwalo langempela kugcinwa bakholelwa ukuthi yen 15,000 ukuze 20,000 okungenani.
ngisho njengoba kwakwenziwa kahle uma uboleka imali, lapho ukuba abuyisele eziphuthumayo kungashiwo kubantu abaningi umzukuzuku ngesikhathi ingxenye isithakazelo.
Ngisho ngaphansi senkokhelo nyangazonke, eqinisweni, akazange abuyele isithakazelo kuphela, akusona kancane indaba.
ukuze ukuboleka ngesikhathi ngaphansana
zenzalo ukunciphisa umthwalo
isithakazelo, kubalulekile ukukhetha ongaphakeme senzalo inkampani. Lokho kusho
, zenzalo ezilotshwe ukukhangiswa kulotshiwe anhlobonhlobo kusukela mkhawulo umkhawulo ephansi, lapho empeleni basebenzisa, futhi yini ukuboleka ngasiphi inani lenzalo ungazi, ngeke ambalwa abacabanga izinkathazo . Ukuze wehlise
zenzalo elandelayo izimo ke kubalulekile.
ngabe kukhona imali ezinzile
umuntu ngokokuqala ngq? ebolekiwe, ukuze ukusizakala ngenzalo ephansi, kubalulekile ukuthi uthola imali abanye izinze.
Yiqiniso, okusezingeni eliphezulu ukuthi bazitholela imadlana yonyaka, kubalulekile kodwa isibe ebalulekile ukubaluleka nendlela amabhange ukuthi "uma abantu ungabuyela kahle, ngisho ngokuhamba kwesikhathi."
noma ukuboleka indawo kangakanani kukhona ka
has a multiple wokuboleka, bathambekele ngempela senzalo lingaphezulu.
Ngakho, indlela ofuna cabangela is ukunciphisa uya khona kwemali.
izikweletu wena ukuhlanganisa iwukuba awela kulesi sigaba, kodwa Uma une omunye ongaphakeme lenzalo ibhange izikhungo zezimali ukuboleka, kuzoholela ekunciphiseni senkokhelo ekugcineni. Njengoba ekuphathweni ingozi iba lula ukuba kusuka
ebhange eceleni, ke kungenzeka waboleka ngezindleko eziphansi senzalo.
okokuqala ukuboleka imali ebhange, inani lenzalo imayelana 5% ezezimali umthengi Ngokuphambene, mayelana 4 amaphesenti kuyoba intengo emakethe.
Ngakho-ke, futhi ukuze umthwalo lasebhange uphansi kuya isikhwama, Kusemqoka ukucabanga mayelana nokusetshenziswa ibhange kwasekuqaleni. Lokho kusho
, uma kungakhathaliseki ukuthi ngokuqinile ulwazi lwabo siqu credit futhi uyifake ebhange, lenzalo Noma yimuphi kuphela lapho izimo ezinhle uzogcina ephakeme.
uma, uma isimo lapho waboleka kwezinye izikhungo zezimali, esimweni lapho ukuhlanganisa izikweletu futhi sinombono uqiniseke sikhethe kuzuzisa nomunye. Lapho
enqolobaneni, ngale ndlela, "noma ezibolekiwe lula" nje "noma ukubuyiswa kwemali lula, zenzalo ezithandwa noma ophansi" esicabanga ukuthi kubalulekile.
Noma kwemali indawo kangakanani kukhona ka
endabeni umuntu kuyinto amaningi wokuboleka, bathambekele ngempela senzalo lingaphezulu.
Ngesikhathi sokuqala uma ukuboleka imali
Bank, esimweni we ezezimali umthengi inani lenzalo ka-5%, ama-4%, kuyoba intengo emakethe.